အသားလုံးအိအိစက်စက်လေးတွေနဲ့ တွဲဖက်အရသာခံရမယ့် ဝက်သားလုံးရှမ်းခေါက်ဆွဲ – FoodiesNavi
အသားလုံးအိအိစက်စက်လေးတွေနဲ့ တွဲဖက်အရသာခံရမယ့် ဝက်သားလုံးရှမ်းခေါက်ဆွဲ
By yin sandi On October 22, 2018 0
ဝက်သားမျှင်မွမွလေးတွေကို ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်လေးလုံးထားတဲ့ အသားအရသာဓာတ်ပြည့်ပြည့်ဝဝ ဝက်သားလုံးလေးတွေကို ရှမ်းခေါက်ဆွဲလေးနဲ့တွဲဖက်စားလိုက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းလိုက်မလဲနော် ? မင်မင်ကတော့ စားဖူးခဲ့ပါပြီ အရမ်းတွေခံတွင်းတွေ့လွန်းလို့ ပြန်လည်တွေးတောနေရင်းတောင် သွားရည်တွေထိန်းရတဲ့အထိပါပဲ ? မင်မင့်ဘော်ဒါတွေကိုလည်း အရသာကောင်းလေးတွေစားစေချင်လွန်းလို့ ဖောက်သည်ချပေးချင်ပါတယ်။ ဆေးထိုးတယ်တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့နော် ? ဝက်သားလုံးရှမ်းခေါက်ဆွဲရနိုင်မယ့်ဆိုင်လေးက တောင်ဒဂုံထဲမှာဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ဝေးတယ်ရယ်။ အစားအသောက်အတွက်ဆို ဘယ်လောက်ဝေးဝေးနယ်ချဲ့မယ်ဆိုတဲ့ အစားတစ်လိုင်းတွေအတွက်တော့ အိုကေနိုင်မှာပါနော်။
ဝက်သားလုံးရှမ်းခေါက်ဆွဲရနိုင်မယ့်ဆိုင်လေးက “နန်းမြဦး”ပါ။ ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုနာမည်ကြီးလွန်းလို့ အဝေးကနေပါလာစားကြရတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ အိမ်ဆိုင်ဖြစ်ပေမယ့် နာမည်ကြီးလွန်းလို့ တောင်ဒဂုံထဲမှာတောင် ဆိုင်(၂)ဆိုင်ရှိနေပါပြီ။ မင်မင်သွားစားခဲ့တာတော့ မူလဖွင့်တဲ့ဆိုင်လေး ? ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲဝက်သားနဲ့စားနေကျပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့အဆန်းအနေနဲ့ ဝက်သားလုံးရှမ်းခေါက်ဆွဲလေးကို စမ်းမှာကြည့်လိုက်တယ်။ တော်တော်လေးတော့စောင့်ရတယ်ရယ် ? မှာမှအသားတွေကို ချက်ချင်းကြီးလုံးပြီးပြုတ်နေတော့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ရှယ်တော့ စားရတယ် ? အသားလုံး(၂)လုံး(၃)လုံးလောက်ပဲမျှော်လင့်ထားတာ ရောက်လာတော့ အပုံလိုက်ကြီးဆိုတော့ မြင်ရတာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ ? ရေကြည့်တော့ တစ်ပွဲကို(၁၂)လုံးပါတယ်ရယ်။ တစ်လုံးရဲ့အရွယ်အစားကလည်း အာခံတွင်းနဲ့အပြည့်ရယ် ? အသားလုံးလေးကို ကိုက်လိုက်တာနဲ့ အိစက်နူးညံ့တဲ့အသားအထိအတွေ့လေး ခံစားလိုက်ရပြီး အရသာက အသားရဲ့ချိုမြမှုတွေကို ထိထိမိမိကြီးခံစားလိုက်ရတယ်ရယ်။
အသားလုံးလေးကိုက်လိုက် ရှမ်းခေါက်ဆွဲလေးစားလိုက်နဲ့ ရှယ်တွေခံတွင်းတွေ့ချက်ပဲရယ် ? တစ်ပန်းကန်လုံးကုန်သွားမှန်းတောင်မသိလိုက်ဘူး ? ဗိုက်ကြီးတင်းပြီးကားသွားမှ ကုန်မှန်းသိတော့တယ် ? တစ်ပွဲကို(၃)ထောင်ပေးရတယ်။ (၃)ထောင်ဆိုတော့အစကနှမြောနေသေးတယ်ရယ် ? စားကြည့်ပြီးအားရှိသွားမှ ပေးရတာနဲ့တန်တယ်ဆိုပြီး ကြိတ်ပြီးပီတိတွေဖြာနေရော ? အစားတစ်လိုင်းမှန်ရင်တော့ ဒါလေးကိုကျိန်းသေစားဖူးစေချင်တယ်။ ကောင်းလွန်းလို့လောကကြီးကိုတောင် မေ့သွားမယ်နော် ?
ရှမ်းခေါက်ဆွဲနဲ့တခြားရှမ်းအစားအစာတွေ ၊ နံရိုးပေါင်းတွေလည်းကောင်းတယ်။ ရှမ်းခေါက်ဆွဲရိုးရိုးအသားနဲ့ဆိုရင်တော့ (၁)ထောင်လားပဲပေးရတယ်။ ဆိုင်ကတော့ အိမ်ဆိုင်လေးကိုမှ အတော့်ကိုသန့်တယ်။ ရေနွေးခွက်ချပေးတာတောင် ညှပ်လေးနဲ့ချပေးတာရယ်။ ပါဆယ်ဝယ်ရင် အိတ်နဲ့ထည့်ပေးတာတစ်ခုပဲစိတ်တိုင်းမကျတာရယ်။ ကျန်တာတော့ လုံးဝအဆင်ပြေတယ်။
အစားတစ်လိုင်းတို့သွားစားချင်ရင်တော့ နန်းမြဦးရဲ့လိပ်စာက တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ဂိတ်ဟောင်းမှတ်တိုင် ၊ မြို့ထဲဘက်အပြန်အခြမ်းကကားဂိတ်နဲ့ပိုနီးပါတယ်။ မှတ်တိုင်ရှေ့လမ်းမ စည်ပင်လမ်းပေါ်မှာပါ။ အာ့နားမှာတော့ ဆိုင်တွေကအပုံကြီးပဲ ။ My Meed တိုတဲ့ဆိုင်လေးနဲ့ကပ်ရပ်ပါ။ YBS စီးမယ်ဆိုရင်တော့ 59, 3,6 ကားတွေရောက်ပါတယ်နော်။ ?
In Reviews Tagged pork ball shan noodle Leaveacomment
ဒင်းဆမ်းပူပူနွေးနွေးလေးကို အိမ်မှာတင် မှာစားလို့ရပြီနော်။
ဈေးတန်ပြီးအရသာကောင်းလွန်းလို့ လတ်တလောရေပန်းစားနေတဲ့ ကိုရီးယားစားသောက်ဆိုင်
မာလာရှမ်းကောကို အရသာပုံမှန်ဈေးတန်တန်နဲ့ စားချင်သူများအတွက် Shwe Spicy
တန်ပါတယ်ဆိုတာတွေထက် ပိုတန်လွန်းတဲ့ (၁)ရာဖိုး(၃)ချောင်းတန် ဝက်သားဒုတ်ထိုး
Tax နဲ့ Service Charge တွေမပေးရဘဲ (၆၈၀၀)ကျပ်တည်းနဲ့ သုံးထပ်သားကင် အဝစားနိုင်မယ့် Banana